सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्दैछन् महिला | मेरो नेपाल अनलाइन
Home अन्तरक्रिया सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्दैछन् महिला
सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्दैछन् महिला
Posted By: Purna khadkaon: ०७ फागुन, २०७३ In: अन्तरक्रिया, मुख्य समाचारNo Comments
सुर्खेत, ७ फाल्गुन ।
तालिममा सहभागि धेरै मध्य पसल व्यवसाय गरेर घर खर्च चलाउने एक महिला हुन् खगीसरा गाहा । दशरथपुर वडा नं. ७ घर भएकी खगीसरा घर परिवार लगायत श्रीमान्बाट पिडित महिला हुन् । उनले संयोग बस सिकाई कटाई तालिम लिन पाएको र लिएको तालिम भरपुर व्यवहारमा उतारेको बताउँछिन् । अहिले पसलनै बनेको आफ्नो दैनिकी खर्च चलाउने माध्यम भएको छ । खगीसरा निकै सास्ती खेप्ने महिलाहरु मध्ये एक हुन् । नमूना महिला सञ्जालले सञ्चालन गरेको उक्त सिलाई कटाई तालिम आफ्ना लागि ठुलो गुन भएको बताईन् ।
खगीसराले भनिन् “उक्त तालिम लिन जाँदा निकै हम्मे–हम्मे भयो छोरीलाई विहान खाना बनाई खुवाएर विद्यालय पठानु पथ्र्याे । बाख्रा भैसीलाई घासँ काटेर आफु तालिम लिन आउनु बाध्यता सुनाईन्” फेरि थपिन् “घरमा सासुसँग त्यति मेलमिलाप थिएन ।” जसो तसो गरी तीन महिनाको तालिम सकिएको बताईन् । खगिसराले तालिममा सामान्य कुर्ता, सुरुवाल काट्न र सिलाउन मात्र सिकेको बताईन् । ‘सिकेको तालिमबाट गाउँ घरका फाटेका लत्ता, कपडा सिलाउने थोरै–थोरै रुपैयाँ दिने गरेकोले मलाई अरु तालिम लिने इच्छा भयो’ उनले भनिन तीन महिनाको तालिम आफुलाई अझ अपुग भएर आफ्नै लगानीमा डिजाईन सिक्न र काट्न थप तीन महिनाको तालिम सिकेको बताईन । डिजाइन सिकेर थप कपडा डिजाईन गर्न र सिलाउन सहज भएको बताईन् ।
यसरी प्राप्त गरेको सिपलाई खेर जान नदिन तीन जनाले पसल खोलेर बस्ने सल्लाह गरे । उक्त योजना गरी दशरथपुर–५ बजारमा साझा दिदीबहिनी टेलर्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आफ्नै लगानीमा ६ वटा मेसिन किनेर पसल खोलेको खगीसराले बताईन् । पसलमा कोहि सिक्न इच्छा भएका दिदिवहिनीहरुलाई पनि सिकाउने सोँच राखेर ६ वटा मसिन खरिद गरेको उनको भनाई छ ।
‘पसल विहान ९, १० वजे खोल्छौ, पसलमा प्राय खुल्ला हुन्छ । अहिले पसलमा काम भनेको दिनमा एक जनाले २ जोर कुर्ता, सुरुवाल सिलाईन्छ । फाटेका कपडाहरु ल्याउँछन त्यो पनि सिलाईन्छ । पसलमा आजभोलि कपडा थुप्रै आउछन् सिलाउन भ्याई नभ्याई हुन्छ’ – खगीसराको भनाइ छ ।
दिनमा कम भनेको एक जनाको ४, ५ सय कमाई हुने गरेको छ । छोराछोरीहरुलाई पढाउन घर खर्च नुन, तेल र लत्ता कपडा किन्न सजिलो भएको छ । घर परिवारको भरपर्नु पर्दैन आजभोलि यो तालिम लिएर पसल खोलेपछि सहकारी संस्थामा पसलको नाममा दैनिक १०० रुपैयाँ वचत गर्ने गरेको बताइएको छ ।
तालिम सिकेर पेशा व्यवसाय गरेर आयआर्जन गर्ने मध्य अर्की हुन् गीता खत्री । गीताको दशरथपुर वडा नं. ५ मा घर रहेको छ । गीताले पहिले आफुलाई आवश्यक पर्ने घर खर्च, छोराछोरीको पढाई खर्च समेत श्रीमान्को भर पर्ने गरेको बताईन् । आफु पहिले घरमा खालि बस्ने अन्य कुनैपनि काम नहुने बताईन् । सिलाई कटाई तालिम सिकेर अहिले पसल सञ्चालन गरेर आफ्नो दैनिकी लगायतका खर्चहरु टार्न सहज भएको गीताको भनाई छ ।
उनले भनिन् “पसल तीन जनाको संयुक्त लगानिमा खालेका छौँ, हामी तीनै जनाले दैनिक भ्याएसम्म विहान ९÷१० बजेदेखि पसल खोल्ने र साँझसम्म पसलमै बस्छौँ । दैनिक १ जनाले २ जोरसम्म सिलाउने गरेको बताउँदै, घरको काम सकाएर पसलमा गएपनि महिनामा १२ देखि १५ हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।” अहिले श्रीमान्को भर पर्नु पर्दैन आफ्नै व्यवसायले छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क, ट्युशन शुल्क, डे«सहरु पसलबाटै खर्च गर्ने गरेको बताईन् ।
नमूना महिला सञ्जाल दशरथपुरले विगतको ६ बर्षयता विभिन्न सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गाविसमा आएको महिलाहरुको लक्षित वर्गको रकमबाट तालिम सञ्चालन गर्दै आएको सञ्जालकी अध्यक्ष खगीसरा आचार्यले बताईन् । गाउँमा पिडित महिला, हेपिएका, हिंसामा परेका विभिन्न स्तरका महिलाहरुलाई चेतना फैलाउने काम सञ्जालले गरेको छ । गाउँका पिडित महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयआर्जनमुलक तालिम आयोजना गर्दै आएको अध्यक्ष आर्चायले बताईन् । सञ्जालले प्रत्येक वडामा भेला गराएर स्वयंम उनीहरुले नै तालिममा सहभागि गराउने गरेको उनको भनाई छ ।
गाउँमा सिलाई, कटाई तालिमका लागि वडा, वडामा भेला गराईएको थियो । उक्त भेलाबाट सिफारिस गरेका महिलाहरु तालिममा सहभागि हुने गर्दछन् । तालिमका लागि प्रत्येक वडाबाट दुई जना छनौंट गर्ने गरिएको सञ्जालकी अध्यक्ष खगीसराले बताईन् । महिला दिदिबहिनीको माग अनुसार विभिन्न सिप मुलक तालिम आयोजन ागर्ने क्रममा सिलाई कटाई तालिमको आयोजना गरिएको हो । उक्त सिलाई कटाई तालिम ३ महिनासम्म शक्ति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सञ्चालन भई सम्पन्न भएको थियो ।
भेरी–बबई डाइभर्सनमा ‘टिबिएम’
९ दिने धनधान्याञ्चल बिराट संगीतमय ज्ञानमहायज्ञ बाँसगढीमा संचालन हुने/तयारी पुरा